पुरानो चाड इन्द्रजात्रा- विचार - कान्तिपुर समाचार
पुरानो चाड इन्द्रजात्रा
भाद्र २३, २०७१ प्रा. वीणा पौड्याल
इन्द्रदेवको उल्लेख वेदमा धेरैपल्ट छ । त्यसैले इन्द्र वैदिक देवता हुन् ।
कट्टर हिन्दुहरू वेदलाई ब्रहमाको सृष्टि अर्थात अपौरुषेय भन्न रुचाउँछन् । उनीहरूको विचारमा सामान्य मानिसले वेदमा उल्लेख गरिएका माथिल्लो स्तरको दर्शन मनन गरेर व्यक्त गर्नै सक्तैनन् । महत्त्वपूर्ण सूक्त र मन्त्रहरूले भरिपूर्ण वेदको रचना मानिसद्वारा सम्भव छैन । त्यसैले वेदको रचनालाई ब्रहमाको सृष्टिसँग जोडियो । दर्शन र धर्ममा पनि तर्क गर्न रुचाउने हिन्दुहरू भने वेद विशिष्ट गुण भएका मानिसहरूले देखेको अनुभव गरेका विचारहरूकोे संकलन मान्छन् । वेद अद्वितीय ग्रन्थ हो । यसमा इन्द्र देवको आहान, स्तुति, पूजन र उनीसँग मागिएको सहयोगको विषय समावेश भएका सूक्तहरू थुप्रै छन् । वेदको समय देखि आजसम्म इन्द्रको आव्हृानद्वारा सम्पन्न गरिने यज्ञ, हवन, पूजन, रथारोहण रथयात्रा, रक्षा सूत्र वन्धन र इन्द्रध्वज उत्सव समारोह अविरल चलिरहेकै छ । प्राचीन कालमा इन्द्रको उत्सवलाई इन्द्रमह भनेर वर्णन गरिएको छ ।
सनातन धर्मावलम्बीहरूका प्रमुख र प्रचलित चाड दशैं, तिहार र फागुभन्दा पनि इन्द्रजात्रालाई संस्कृतिविदहरूले पुरानो चाड मानेका छन् । भदौ महिनाको शुक्लपक्षको द्वादशीमा प्रारम्भ हुने यो जात्रा आठ दिनसम्म मनाइन्छ । औपचारिक रूपमा द्वादशी अर्थात् बामन द्वादशीको दिनमा रथयात्रा गरेर यस जात्रालाई ठूलो जनसमूह, राष्ट्रप्रमुख र विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको उपस्थितिमा भब्य रूपमा परिचालन गरिन्छ । इन्द्रजात्रा र लिंगो -ध्वजा) ठड्याउने प्रचलनको सम्बन्धमा वाल्मीकि रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण, कालिका पुराण, देवीपुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, बृहत्संहिता र भविष्य पुराणमा विस्तृत वर्णन पाइन्छ ।
इन्त्रजात्रा -इन्द्रमह) को प्रमुख कार्य नै लिंगो -ध्वजा) स्थापना हो । पुराण अनुसार प्राचीन कालमा देवता र असुरहरू ठूलो युद्धको तयारीमा लागे । त्रिदेव र सम्पूर्ण देवगणले देवराज इन्द्रलाई विजयी गराउन ध्वजा बनाएर त्यसलाई पूजा गरेर इन्द्रलाई हस्तान्तरण गरे । इन्द्रले समातेकाले त्यस ध्वजालाई इन्द्रध्वजा भनियो । देवासुर संग्राममा देवताहरूको विजय भएपछि इन्द्रध्वज पूजा र समारोहले निरन्तरता पायो । स्वर्गलोग र पृथ्वीमा समेत विजयको कामनाले राजाहरूले इन्द्रध्वज स्थापना गर्न थाले । पृथ्वीको राजा उपरिचर वसुलाई देवराज इन्द्रले इन्द्रध्वजा दिएपछि उनले युद्धमा सजिलै विजय हासिल गरेको चर्चाले सबैमा यो पर्व मनाउने हौसला जाग्यो । आफ्नो राज्यमा सुख, समृद्धि वृद्धि गर्न इन्द्रध्वजा स्थापना गर्ने परम्परा बस्यो ।
ज्योतिषशास्त्रका ज्ञाता वराहमिहिरको ग्रन्थ 'बृहत्संहिता'मा इन्द्रध्वजा स्थापनाको नियम, पूजा विधि र फल प्राप्तिको विस्तृत वर्णन छ । इन्द्रजात्राको अवसरमा काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न स्थानमा देवराज इन्द्रको प्रतिमा प्रदर्शन गरिन्छ । अस्थायी रूपले बनाइएको मचान, खम्बा पाटीमा समेत इन्द्रका प्रतिमाहरू पूजा दर्शनको लागि व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । अष्ट दिक्पालमध्ये इन्द्र पनि एक हुन् । प्रतिमा विज्ञानका पुस्तकमा इन्द्रको प्रतिमा लक्षण बताइएको छ ।
इन्द्रले पूर्व, यमले दक्षिण, निऋतिले दक्षिण पश्चिम, वरुणले पश्चिम, वायुले उत्तर पश्चिम, कुवेरले उत्तर, इशानले उत्तर पूर्व र अग्निले दक्षिण पूर्व दिशाको रेखदेख गर्छन् । अन्तरिक्षका देवता इन्द्रलाई वषर्ा, उर्वरा शक्ति र युद्धको देवताको रूपमा वेद र पुराणमा वर्णन गरिएको छ । इन्द्रलाई वृष्टि र वृतलाई अनावृष्टिको प्रतीक मानेर रचित शुक्तहरू वेदमा छन् । बृहत्संहितामा इन्द्रको मूर्ति बनाउँदा हातमा बज्र लिएको, हात्तीमा चढेको बनाउनुपर्छ । विष्णु धर्मोत्तर पुराणमा भने नीलो लुुगा लगाएको स्वर्णजस्तो अनुहार, निधारमा तेस्रो आँखा, देब्रेतिर गहना लगाएकी शक्तिसहित चार दाँत भएका सेतो रङ्गको हात्तीमा -ऐरावत) बसेको देखाउनुपर्ने विधानको उल्लेख छ । इन्द्रको प्रतिमा बनाउँदा हात्तीमा चढेको, चौडा छाती, लामो हात, हज्जारौं आँखा, हातमा कमलको फूल र बज्र लिएको, हात्तीमा चढेको बनाउने प्रावधानको वर्णन मत्स्यपुराणमा छ ।
रूप मण्डनमा अष्ट दिक्पालको मूर्ति बनाउँदा चारवटा हातहरू निर्माण गर्ने प्रावधान छ । तर द्विभुजको लोकपाल प्रतिमा बनाउन विधान प्राचीन नै हो । मानसोल्लासमा सबै लोकपालहरू द्विभुज हुने वर्णन छ । बौद्ध र जैन मूर्ति विधानमा पनि दिक्पालको महत्त्व प्रस्ट पारिएको छ । अंशुमदभेदागममा इन्द्रको दुई आँखा र दुई हातमा शक्ति र अंकुश देखाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।
विभिन्न ग्रन्थमा निर्देशन भएअनुरुप नै इन्द्रका मूर्तिहरू नेपालमा निर्मित भएका छन् । शैव परिवारका देव -देवीका निधारमा तेस्ा्रो आँखा ठाडोे गरेर र देवराज इन्द्रको तेर्साे गरेर बनाइन्छ । इन्द्रलाई सहस्रलोचन पनि भनिन्छ । हज्जारौं आँखा हुनुको कारण पुराणहरूमा प्रस्ट पारिएको छ । सप्तऋषिहरूमध्ये एक गौतमको आश्रमको व्यवस्था, सरसफाइ र आध्यात्मिक चिन्तन मनन, ध्यान र योग बारेको चर्चा देवलोकमा बेलाबेला हुने गथ्र्याे । स्वर्गलोकबाट देवताहरू ऋषि गौतमको आश्रममा बेलाबेला आउँथे, एकपल्ट देवराजले ऋषि गौतमको भेषमा आश्रममा आएर अहल्यासँग समागम गरे । नक्कली गौतमलाई गौतम ऋषिले देख्दा आश्चर्य मानेको र योनिमा लुब्ध भएकोले शरीरभर नै हजार योनि उत्पन्न हुने श्राप दिएको उल्लेख छ । ऋषि गौतमले पत्नी अहल्यालाई पनि ढुङ्गामा परिणत हुने अर्थात कष्टकर जीवन आश्रममै लुकेर बसेर आफ्ना दिनहरू बिताउनुपरोस् भन्ने श्राप दिएका थिए । रङ्गनाथ रामायणअनुसार गौतम ऋषिको तपस्या भङ्ग गरेर, इन्द्रको आसन बचाउन इन्द्रले नै ऋषि पत्नी अहल्याको सतित्व नष्ट गरेका थिए । गौतमको श्रापमोचन गर्न इन्द्रले गौतमी नदीमा डुबुल्की लगाएको र देवीको वरदानपछि इन्द्रको शरीरमा भएका योनि आँखामा परिवर्तित भएको वर्णन पद्मपुराणमा छ ।
बनेपा, पनौतीमा निर्मित इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिरको परिशरमा अहल्या मन्दिरको अवशेष पत्थर अझै छ । इन्द्रले आफूले गरेको कुकर्मको प्रायश्चित गर्न पुण्यमति, रोशी र लीलावतीको संगममा स्नान गरेर आफ्ना आराध्यदेव शिवको लिङ्ग स्थापना गरेर इन्दे्रश्वर मन्दिर बनाएको किंवदन्ती प्रचलनमा छ ।
इन्द्रको शरीरभर नै आँखा भएकोले सहस्रलोचन भनिन्छ । महाभारतको आदिपर्वमा भने शिवको चार मुख र इन्द्रको हज्जार आँखाको उत्पत्तिबारे रोचक वर्णन छ । दैत्य दाज्युभाइ सुन्द र उपसुन्दको उपद्रोले गर्दा देवगणहरू हैरान भएका थिए । अप्सरा तिलोत्तमाको सहयोगले दुवै भाइलाई दमन गर्ने निर्णय देवताहरूले लिए । तिलोत्तमा अति नै सुन्दरी थिइन् । पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण उत्तम वस्तुको ससाना टुक्रा अर्थात् तिलांश जम्मा पारेर निर्माण गरिएको हुनाले उनको नाम तिलोत्तमा भयो । देवलोकमा देवताहरूलाई पूजा गरेर आफ्नो काममा जाने तयारी तिलोत्तमाले गरिन् । तिलोत्तमाले देवताहरूलाई वरिपरि घुमेर आराधना स्तुति र पूजा गरिन् । तिलोत्तमालाई बारम्बार आँखै नझिम्काएर हेर्दा शिवको चारै दिशामा शिरहरू उत्पन्न भए, देवराज इन्द्रको पनि शरीरमा आँखैआँखा निस्किए । यसरी शिवको चार मुख र इन्द्रको हज्जारौं आँखाको उत्पत्तिबारे पुराणहरूमा रोचक वर्णन पाइन्छ । इन्द्र, देवताहरूका राजा भएकाले सधैं चनाखो, कूटनीतिपूर्ण र सबैतिर दृष्टि पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले हज्जारौं आँखा भनेको सबैतिर विचार पुर्‍याउने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ । पेय पदार्थ सोमरसको उल्लेख वेदको धेरै ठाउँमा छ । इन्द्रलाई सोमरस पान गर्ने र त्यसको प्रशंसक र पारखीको रूपमा वर्णन गरिएको छ । इन्द्र र सोमरसको सम्बन्धको कारणले गर्दा उनलाई 'सोमपा' पनि भनिन्छ । सोमरसलाई अमृतसँग तुलना गरिएको छ । सोमरस पिएर अमरत्व प्राप्त गर्न सकिने वर्णन ऋग्वेदमा छ । स्वर्गमा मात्रै उपलब्ध हुने सोमलता, मानिसलाई स्वस्थ निरोगी बनाउन पृथ्वीमा ल्याइएको थियो । सोमरस पिएर आरोग्य, आनन्द, आयु, वीर्य, प्रतिभा, मेधा, प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख शास्त्रहरूमा छ । सोमरसलाई दूध, दही, घिउ, मह, पानी र जौंको सातुसँग मिसाउने तरिकाको वर्णन वेदमा छ । वैदिक समयमा सोम पवित्र र सबैले ग्रहण गर्नसक्ने पेय पदार्थ थियो । तर सुराको अवगुणले गर्दा त्यसलाई हेय दृष्टिले हेरिन्थ्यो । असुरहरूको पतनको एउटा प्रमुख कारण नै अत्यधिक सुरापानलाई मानिएको छ । त्यागी र दानी ऋषि दधिचिको हड्डीबाट बनाइएको बज्रद्वारा देवराज इन्द्रले वृत्रसहित आठ सयभन्दा बढी दैत्यहरूलाई मारेको वर्णन वेदमा छ ।
देवराज इन्द्रको बेग्लै सम्प्रदाय नभए पनि हिन्दुहरूका अति चर्चित र पुजित देवतामा यिनी पर्छन् । वषर्ा, उर्वरा र युद्धको देवताको रूपमा इन्द्रको पूजा वैदिक समयदेखि आजसम्म चलिरहेकै छ । पौराणिक समयका श्रीकृष्णको प्रभुत्व बढेको समयमा इन्द्रको पूजा कम गरिएको प्रमाण पुराणहरूमा छ । श्रीकृष्ण र इन्द्रको संवादबाट वैदिक देवताको पतन र पौराणिक देवताको उत्थानबारे धेरै तथ्य प्रस्ट हुन्छ । इन्द्रलाई सौर देवताको रूपमा पूजा गरिन्छ ।
बाह्र महिनाका बाह्र आदित्यमध्ये भदौ महिना इन्द्रको विशेष महिना मानिन्छ । त्यसैले उनको उत्सव पूजा, जात्रा भदौ महिनामै सम्पन्न गरिन्छ । इन्द्र ध्वजोत्थानको ८ दिनभित्र सम्पन्न गरिने कुमारी र भैरवको विशेष रथयात्रा काठमाडौं उपत्यकावासीको महत्त्वपूर्ण ठूलो चाड हो । इन्द्रजात्रामा प्रदर्शन गरिने इन्द्रका काष्ठ र धातु मूर्तिमा दुवै हात डोरीले बाँधेको देखाइन्छ । यस प्रकारको मूर्ति प्रदर्शनबाट देवताका राजा भए पनि आफूले गरेको कर्मको सजाय, दण्ड सबैले पाउनैपर्छ भन्ने शिक्षाद्वारा जनसमुदायलाई सचेत बनाउन खोजिएको हो । उपत्यकामा प्रचलित किंवदन्तीअनुसार इन्द्रले आमाको लागि पारिजात फूल र कर्कलो एउटा कृषकको बारीबाट अनुमति नलिएरै टिपे । नसोधेर फूल टिपेको आरोपमा कृषकले इन्द्रलाई समातेर, बाँधेर सहर परिक्रमा गराएर दण्ड दिए । हरेक वर्ष त्यही घटनाको स्मरणमा काठमाडांै उपत्यकामा इन्द्रजात्राको दिन इन्द्रको हात बाँधेको मूर्ति प्रदर्शन गरिन्छ ।
प्रकाशित : भाद्र २३, २०७१ ०८:२९
भाद्र २३, २०७१ सुमन खरेल
काठमाडौ — बेलायतमा रहेका अधिकांश नेपालीहरू सहयोग जुटाउन तत्पर हुने गर्छन् ।
नेपालको कुनै गाउँमा आगलागी होस् वा बाढीपहिरोको मार परोस्, चाहे क्रिकेट कप्तान पारस खड्का आउन् वा समाजसेवी दीक्षा चापागाई, चाहे जिल्लामा एम्बुलेन्स प्रदान गर्न होस् वा विद्यालय बनाउन होस्, परदेशी नेपालीका हातहरू अघि बढिहाल्छन् । कहीं कोही मर्दा होस् वा कहीं केही पर्दा होस्, विभिन्न कारण्ाले परदेशमा रहेका नेपालीहरू सहयोग पुर्‍याउन पछि परेका छैनन् ।
बेलायतमात्र होइन, खाडी राष्ट्रहरूदेखि लिएर युरोप, अमेरिका, इजरेल र अष्ट्रेलियासम्म दर्जनौं देशमा छरिएका नेपालीहरूमा प्रचुर मात्रामा परोपकारी भाव भेट्न सकिन्छ । तर आफू धेरै वर्षदेखि बेलायतमा बस्दै आएकोले बेलायतमा विद्यमान त्यही भावनालाई नियाल्न खोज्दैछु ।
बोल्न सक्नेले त पढेर, अन्तर्वार्ता दिएर जागिर खाला, हातगोडा चल्नेले पाखुराको भरमा जीवन अघि बढाउला । तर जो बोल्न सक्दैन, हिंँडडुल गर्न सक्दैन, जसलाई हेर्न राष्ट्र अघि बढ्दैन, त्यस्ता सुस्त मनस्थितिका बालबालिकाहरूको भविष्य कस्तो होला ? ती बालबालिकाका आमाबाबुका जीवनभरिका कठिनाइहरू कसले बुझ्ने ? त्यस्ता अनेक बालबालिकालाई आफ्नै घर, समाज, देश र विदेशमा देख्दा यस्तो लाग्छ, कतै भगवानले पनि कुनै पाप गरेका त होइनन् ? तर पीडामात्र बोकेर मानिसको जीवन चल्न गाह्रो हुन्छ । पीडालाई पुण्यमा परिण्ात गर्नसके जीवन बाँच्न अलि सजिलो हुनसक्छ । नेपालका त्यस्तै केही बालबालिकाहरूलाई सानो सहयोग जुटाउनसके, उनीहरूको अनुहारमा अलिकति भए पनि खुशी थप्नसके आत्मसन्तुष्टि मिल्ने थियो भन्ने हेतुले यी कार्यक्रमहरू आयोजना हुनलागेका हुन् ।
बेलायतमा अध्ययन गर्न आएका केही विद्यार्थीहरूले सन् १९६० मा पशुपतिशमशेर राण्ााको अध्यक्षतामा स्थापना गरेको यती नेपाली एसोसिएसन यु.के. नै यहाँको सबभन्दा जेठो नेपाली संस्था हो । सन् २००० अघि बेलायतमा नेपालीहरूको संख्या त्यति ठूलो थिएन । संघ-संस्थाहरू पनि कमै थिए र परोपकारी कामहरू पनि कमै
हुने गर्थे ।
गैरआवासीय नेपालीहरूको संगठन एनआरएनएको परिकल्पना रूसमा भए पनि त्यसलाई जन्म दिएर न्वारन गर्ने काम सन् २००३ मा बेलायतमै भएको थियो । केही जोसिला युवाहरूले सन् १९९९ मा लन्डनमा स्थापना गरेको हेल्प नेपाल नेटवर्क पनि अहिले देशमा अनेकौं परोपकारी कार्यहरूमा सक्रिय रूपमा लागिरहेको छ । परोपकारी राष्ट्र बेलायतमा यसरी अनेकौं नेपाली परोपकारी संघ-संस्थाहरूको जन्म भएको छ ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारको बेलायत आगमनपछि नेपाली संघसंस्थाहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनपुग्यो । गाउँको, जिल्लाको, पल्टनको, जातिको, धर्मको, पेसाको, कलासाहित्यको, राजनीतिक आस्थाको, महिलाको, बेलायतका विभिन्न क्षेत्रको अनि यदाकदा विशुद्ध सामाजिक उद्देश्य बोकेका संघसंस्थाहरू एकपछि अर्को खुल्दै गए । यस्तो लाग्छ, यो एउटा अभियानकै रूपमा अघि बढिरहेको छ, एउटा होड नै चलिरहेको छ । अहिले बेलायतमा ३०० भन्दा बढी नेपाली संघसंस्थाहरू रहेको अनुमान छ ।
नेपालमा राजनीतिक दलहरू फुटे र जुटेझैं यहाँका संघ-संस्था र समाजहरू पनि बेलाबखतमा फुट्ने र जुट्ने गर्छन् । कुनै संस्थाको अध्यक्ष हुन मान्छे नै पाइन्न, कुनै संस्थाको अध्यक्ष बन्न टाउको फोडाफोड गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था पनि आएकै छ । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएन युके नै अहिले दुई समूहमा विभाजित भई सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलको जस्तो व्यवहारमा दोहोरी खेलिरहेको छ । तैपनि जब समाज सेवाको कुरा आउँछ, भिन्नाभिन्नै कार्यक्रमहरूमा भए पनि यी संघसंस्थाहरू भेला हुन्छन् र त्यहाँ संकलित रकमको लाभ नेपालकै गाउँ समाज, दीनदुःखी र पीडितहरूले पाउने गर्छन् ।
बेलायतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत तेजबहादुर क्षत्री भन्छन्, 'बेलायतमा बस्ने नेपालीहरूको पहिलो पुस्ता भएकाले उनीहरू आफ्नो भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति भेषभूषा जोगाउनुपर्छ भन्ने भावना राख्छन् । लन्डन दूतावासमा हरेक सप्ताह अन्त्यमा त्यस्तै उद्देश्यका पाँच र सातवटा कार्यक्रमका लागि निमन्त्रण्ाा प्राप्त हुन्छ । प्रायः नेपालमै हुर्केर बढेर आएको यो पुस्तामा संगठित भएर मातृभूमिको लागि केही गरौं भन्ने सोच प्रशस्त मात्रामा भेटिन्छ ।'
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा कार्यरत समाजशास्त्री डा.कृष्ण्ा अधिकारीको भनाइमा देशबाट टाढा भएपछि मानिसहरूमा सामूहिक भावनाको अभिवृद्धि हुनपुग्छ, शारीरिक रूपमा पर भए पनि मानसिक रूपमा देशको नजिक हुन पुगिन्छ । कास्की जिल्लाको आफ्नो गाउँको विद्यालयमा सँंगै बाल्यकाल बिताएको र अहिले बेलायतमै रहेका एक मित्रको उदाहरण्ा दिंदै डा.अधिकारी भन्छन्, 'उसले एसएलसी पनि पास गर्न सकेन । पोखरामा गलत केटाहरूसित हिंँड्थ्यो । परिवारसँंगै बेलायत पसेपछि राम्रै उन्नति गरिराखेको छ । छोराछोरी पनि राम्ररी पढिराखेका छन् । हालै उसले आफूले त पढ्न सकिन, पढ्न चाहनेहरूलाई अलि सजिलो होस् भनेर आफ्नो विद्यालयलाई व्यक्तिगत रूपमा दुई लाख ६५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्‍यो ।'
लामो समयदेखि समाजसेवामा संलग्न सूर्य गुरुङ फुर्सदको समयमा पबमा बसेर रक्सी खानुको सट्टा आफू जन्मेको देश र समाजका लागि केही गर्न अघि बढ्दा सन्तोष प्राप्त हुने विचार राख्छन् । उनी भन्छन्, 'सन् २००४ मा ४१५ रोपनी क्षेत्रफल भएको पोखरा रंगशालामा पर्खाल निर्माण गर्न रकम जुटाउने कामको जिम्मेवारी मलाई दिइयो । जम्मा एक करोड रुपैयाँ आवश्यक थियो । मलाई २० लाखजति उठाइदिन सक्छु कि भन्ने लागेको थियो । तर सहृदयी साथीभाइ र खासगरी पोखरेलीहरूसित सहयोग माग्दै जाँदा ५० लाख रुपैयाँ उठाउन सफल भएँ । त्यसपछि नेपालमा र अन्य राष्ट्रहरूमा रहेका साथीहरू यति उत्साहित भएर सहयोग गर्नथाले कि हाम्रो योजना चाँडै नै पुरा भयो ।' गुरुङकै पहलमा गतवर्ष हेल्प नेपालका लागि करिब एक करोड रुपैयाँ सहयोग संकलन गरिएको थियो ।
गुल्मी जिल्ला समाजले आफ्नो जिल्लामा तीनवटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण्ा गरिसक्यो र अब चौथो एम्बुलेन्स प्रदान गर्ने तयारीमा जुटेको छ । तम्घासस्थित आशा अपांग केन्द्रलाई समाजले हरेक वर्ष २० लाख रुपैयाँ जतिको सहयोग जुटाउने गर्छ । त्यसैगरी म्याग्दी, चितवन, पर्वत र अन्य जिल्लाका समाजहरू पनि आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि सक्दो सहयोग जुटाउन तत्पर देखिन्छन् ।
यसै साता तमुधी यु.के.ले वार्षिक नेपाली मेलाको आयोजना गर्‍यो । नेपालका विभिन्न क्षेत्र र जातजातिको कलासंस्कृति र भेषभूषाको यो बेजोडको प्रदर्शनमा ६ हजारभन्दा बढी मानिसको सहभागिता रहेको बताइन्छ । त्यसैगरी गोर्खा कप, यती कप र अन्य चार-पाँचवटा फुटबल प्रतियोगिताहरूमा पनि नेपालीहरूको ओइरो लाग्ने गर्छ । यस्ता सबै कार्यक्रममा नेपालकै कुनै गाउँठाउँ र आपतवपत्मा परेकाहरूका लागि सहयोग संकलन भइराखेको हुन्छ ।
सहारा युकेका अध्यक्ष नवीन गुरुङको भनाइमा पोखरास्थित सहारा एकेडेमीका लागि उनीहरूले दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानी गरिसकेका छन् र त्यसमध्ये करिब एक करोड ६० लाख बेलायतमै उठाइएको थियो । उनको भनाइमा जीवनमा विभिन्न कठिनाइ भोगिरहेका केटाकेटीको लालनपालन र शिक्षा त छँदै छ, फुटबल खेलप्रति उनीहरूलाई आकर्षर्ित गरेर एउटा योग्य खेलाडीको रूपमा समाजमा स्थापित गराउनु पनि एकेडेमीको उद्देश्य रहेको छ ।
परोपकारी मन राख्ने अर्का समाजसेवी कुल आचार्यले पर्वत जिल्लाको आफ्नो गाउँमा पिताले स्थापना गरेको विद्यालयलाई उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाउन सहयोग गरिदिनुपर्‍यो भनी अनुरोध आउँदा दस लाख रुपैयाँ प्रदान गरँे', आचार्य भन्छन्, 'महिनामा सरदर दुई र तीन लाख रुपैयाँ यस्तै उपकारी कार्यहरूमा दिने गरेको छु ।'
देश र समाजप्रति यस्तो सकारात्मक भाव राख्ने धेरै नेपालीहरू बेलायतमा भेटिन्छन् । जागिर र व्यवसायबाट अलि सम्पन्न भएका मानिसहरूमात्र होइनन्, दिनरात सामान्य परिश्रम गरेर र्फकनेहरू र विद्यार्थीहरू पनि यसरी आयोजना हुने कार्यक्रमहरूमा फुर्सद मिलेसम्म पुगेर १० र २० पाउन्ड खर्च गर्न प्रायः पछि पर्दैनन् ।
तर आजभोलि एउटा गुनासो पनि धेरै सुन्नमा आउने गर्छ, यति धेरै च्यारिटी र अन्य कार्यक्रमहरू हुनथालेका छन् कि धान्न नसक्ने अवस्था आउन लागिसक्यो । देशमा प्राकृतिक प्रकोपको मार परेपछि एउटै उद्देश्यका लागि विभिन्न संघ-संस्थाहरूको एकपछि अर्को अपिल आउन थाल्छ । बरु एउटै संस्थामार्फत सहयोग जुटाउने व्यवस्था भए सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो र सहयोग पनि धेरै गएको देखिन्थ्यो ।
नेपाली गीत संगीतको बढावा र नेपाली कलाकारहरूको उन्नतिमा अहिले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूकै प्रमुख योगदान रहेको कुरा स्वयं कलाकारहरू स्वीकार गर्छन् । नेपालबाट महिनामा तीन-चार वटासम्म कलाकारहरूको टोली आआफ्ना कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न बेलायत आइराखेका हुन्छन् । आफ्नो गीतसंगीत र कलाकारहरूलाई माया गर्न र हौसला दिन पनि परदेशी नेपालीहरू कहिल्यै पछि परेका छैनन् । त्यसैले उनीहरूमध्ये केही भन्छन्, देशले हाम्रो नागरिकतालाई निरन्तरता दिए पनि नदिए पनि हामी निरन्तर आफ्नो देशलाई धेरथोर जति सक्छौं, दिंदै जानेछौं ।
किनभने गीतकार किरण खरेलले लेख्नुभएको यो गीत उनीहरूको जीवनमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ :
नेपालकै गीत गाउँछु बिहान उठेपछि
ढुकढुकीमा बोल्छ नेपाल मुटु चलेपछि¬
लेखक लन्डनस्थित बीबीसीमा कार्यरत सञ्चारकर्मी हुन् ।
प्रकाशित : भाद्र २३, २०७१ ०८:२८
संविधान निर्माणका दुई विकल्प
जातीय हिंसा ननिम्त्याउने उपाय
इजरायलमा कार्यरत महिलाबारे भ्रम
घर छाडी जानेहरु
शरणार्थीमाझ छाएको सन्त्रास